Milaza Ireo Mpikatroka Fa Mampiely Tahotra Sy Fankahalana Ny Olona Pelaka Ny Haino Aman-jery ao Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2017 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Italiano, Español, Français, English
Sary avy amin'i Aziz Karimov. Nampiasaina tao amin'ny Open Caucasus Media ary nahazoana alalana ny famoahana azy indray.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiarahamiasa nosoratan'i Vahid Ali ary nipoitra voalohany tao amin'ny tranonkala OC Media.
Rehefa miresaka momba ny lohahevitra Pelaka, tsy miraharaha mihitsy ny etikan'ny asa fanaovan-gazety lehibe indrindra ny fampahalalam-baovao ao Azerbaijan. Raha tokony hanao tatitra tsy miangatra, dia mampiely fankahalana sy fanavakavahana ny fampahalalam-baovao, ary mandray ny andraikitry ny mpiaro ny fampielezan-kevitra konservativan'ny governemantam-panjakana.
Mbola lohahevitra fady any Azerbaijan ny fahapelahana, ary miatrika fanavakavahana amin'ny lafim-piainana maro, sy sehatra samihafa maro ny olona pelaka, tahaka ny fampianarana, ny fahasalamana, ny asa, ny trano fonenana, ny miaramila sy ny polisy raha hilaza vitsivitsy.
Rehefa miresaka lohahevitra pelaka ny fampahalalam-baovao, tsy maintsy mahasarika vahoaka betsaka kokoa. Mampiasa izany ireo mpiantsehatra ara-politika mba hisarihana ny vahoaka, ka manararaotra ny haino aman-jery, izay atokisan'ny vahoaka na dia teo aza ny tsy fananana fahalalahana [ny media] tsara.
Fiheverana tena misy ho an'ny olona pelaka atao fahirano monina ao amin'ny firenena ny adim-baovao. Miezaka mampiely fampielezan-kevitra sy fandisoam-baovao diso ireo antoko politika mba hanodinkodinana ny sain'ny vahoaka mba handray ireo vitsy an'isa ao amin'ny fiarahamonina ho fahavalo.
‘Indraindray, adinon'ireo mpanao gazety ny herin'izy ireo’
Fitaovana lehibe hampielezana vaovao diso sy fampielezan-kevitra ny haino aman-jery. Na ny fampahalalam-baovao eo ambany fanarahamason'ny governemanta na ny mpanohitra, na izy ireo tsy miankina, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra ao Azerbaijan, manamarina ny fanavakavahana atao amin'ny olona pelaka izy ireo.
Amin'ny famolavolan'ny haino aman-jery ny fitantarana momba ny firaisana ara-nofo, manana andraikitra lehibe mikasika ny fomba fahatakarana sy ny faneken'ny fiarahamonina ireo vondrona atao anjorombala, indrindra ny fiarahamonina pelaka izy ireo.
Samad Ismayilzadeh no mpanorina sy iray amin'ireo mpampanonta ny Minority, gazetiboky voalohany miompana amin'ny pelaka ao amin'ny firenena. Mitsikera ny haino aman-jery i Ismayilzadeh; mino izy fa mandray anjara goavana amin'ny fanefena ny hevi-bahoaka momba ny olona pelaka ny haino aman-jery .
Ismayilzadeh nilaza tamin'ny OC Media hoe:
Indraindray manadino ny fahefan'izy ireo ny mpanao gazety, ary mamitaka ny olona amin'ny fomba tsy matihanina. Mety marina izany indrindra raha ny LGBT no lohahevitra. Rehefa mizara lahatsoratra mihantsy momba ny fiarahamonina LGBT ry zareo dia miezaka manitatra ny lazan'ny vavahadin-tseraseran-dry zareo ny masoivohom-baovao malaza na ny pejy media sosialy, matetika izy ireo miteraka tontolom-pankahalana sy fialan'aina. Manomboka mamaly an-kerisetra ny olona, mitondra hevitra mitongilana momba izany.
Rehefa miresaka momba ny lohahevitra pelaka, dia matetika ny haino aman-jery Azerbaijan mampiasa fiteny fankahalana pelaka sy fankahalana olona nanova taovam-pananahana. Anisan'izany ny lohateny nosafidian'izy ireo sy ny sary asehon'izy ireo, izay misy fiantraikany amin'ny fomba fahatakarana sy ny fahatsapan'ny mpamaky momba ny olona pelaka.
Ohatra, rehefa ao anatin'ny vaovao ny olona mpanova taovam-pananahana, matetika misy heloka bevava idiran'ny polisy izany.
Ny fijoroana vavolombelon'ny nahavita heloka no laharam-pahamehana amin'ny vaovao rehefa mitatitra momba ny heloka bevava mikasika ny fankahalana na vono olona mihatra amin'ny olona nanova taovam-pananahana.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, tsy voatatitra tsara ny antsipirian'ny heloka bevava, fa mifantoka kokoa amin'ny resaka momba ny firaisana ara-nofo sy ny maha-lahy na vavy an'ilay niharam-boina ny fitateram-baovao. Matetika habaribary ny anaran'ny niharam-boina ao anatin'ny kara-pandron'izy ireo alohan'ny hilazana azy ireo hoe lahy na vavy.
Maty nisy namono tao Baku i Hatampasha, lasa vehivavy.
Miboloky (manao tsianjery masiso amin'ny) fankahalan'ny mpanao politika sy ny manampahefana
Manaparitaka an-jambany kabary fankahalana avy amin'ireo mpanao politika, ‘psikology’, mpikambana ao amin'ny parlemanta, sy olo-panjakana malaza hafa ny haino aman-jery, tsy mba manohitra izay lazain'izy ireo na maneho fomba fijery hafa. Matetika feno kabary fankahalana ny lahateny avy amin'ireo manampahefam-panjakana, satria ahitana singa manavakavaka, manavakava-bolon-koditra, mankahala pelaka, sy mankahala olona nanova taovam-pananahana.
Ity ambany ity ny ohatra amin'ireo lamaody fitantarana manavakavaka inian'ny fampahalalam-baovao atao:
Voaràran'ny lalàna ao Azerbaijan ny fanovana ny maha lahy na vavy, fanovàna ny lahy ho vavy sy ny mifamadika amin'izany. Saingy, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, tsy miraharaha izany lalàna izany ireo toeram-pitsaboana tsy miankina. Na dia voaràra amin'ny fomba ofisialy aza, azo atao ny mahita ireo antsoina hoe “olona” nanova ny taovam-pananahan'izy ireo ao amin'ny media sosialy. Tena mahaliana, raha mandràra izany ny lalàna, nahoana i Kamil [anaran-dehilahy] no lasa Kama [anaram-behivavy]? Ny fanontaniana dia momba ny fanovana taovam-pananahana. Midika izany fa ny lehilahy amin'izao andro izao dia ho vehivavy lava volo, manifinify rahampitso, na ny vehivavy tsara tarehy ankehitriny dia ho lasa lehilahy be soroka sy be volombava rahampitso.
Matetika amin'ny endrika ratsy avokoa ny fampisehoana ny olona pelaka ao anatin'ny haino aman-jery, maneho ny tsy fandeferana izay tsy ao Azerbaijan ihany fa ao amin'ny faritra Kaokazia amin'ny ankapobeny ihany koa. Tokony hampitombo ny fankasitrahana sy fanohanana ny vondrom-piarahamonina pelaka ny fanehoana endrika tsara kokoa na ny fitantarana hatrany momba ny vondrom-piarahamonina pelaka, mametraka ny fahapelahana ho toy ny ara-dalàna, ary manome fanazavana bebe kokoa momba ny lohahevitra.
Fampisehoana endrika tsara kokoa ireo olona pelaka
Araka ny filazan'i Ismayilzadeh, misy ireo toe-javatra sasany izay aseho amin'ny endrika tsara sy ara-dalàna kokoa ny olona pelaka, ary asaina amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra mihitsy aza. Miankina amin'ny harena, ny asa, na koa ny fomba fijerin'izy ireo ara-politika mihitsy aza izany, hoy ny fanazavany.
Na dia izany aza, matetika izy ireo miatrika fampijaliana. Mihevitra i Ismayilzadeh fa ny resaka pelaka dia zavatra tsy tian'ny olona eritreretina akory. Matetika “[ny olona] mahita ity lohahevitra ity toy ny olana izay tokony ho hovahana farany, rehefa voavaha daholo ny olana hafa rehetra,” hoy izy.
‘Apokalypsa ankehitriny. Ricky Martin sy ny sakaizany lehilahy vaovao Jwan Yosef ao amin'ny karipetra mena. Brrr’.
Ny fanehoana ny olona pelaka amin'ny endrika tsara ao amin'ny haino aman-jery dia mety misy fiantraikany goavana eo amin'ny fiarahamonina, ary manana fahafahana sy andraikitra hamolavola ny kolontsaina ny haino aman-jery. Amin'ny alalan'ny fantsona sy karazana fampahalalam-baovao rehetra, azo aseho sy mampiseho ny tenan'izy ireo amin'ny maha izy azy ireo; mitovy amin'ny olon-kafa, sy ny vondrom-piarahamonina hafa nanao tahaka izany nandritra ny fotoana ny olona pelaka.
Miezaka manao izany mihitsy ny Minority, maneho hazavana mamiratra momba ny olona pelaka. Mihevitra i Ismayilzadeh fa tokony hanoratra tantara momba ny olona pelaka, ​​tahaka ny dokotera izay mamonjy aina, na mpikatroka miady ho an'ny zon'olombelona ny haino aman-jery. “Misy ireo olona marobe mahafinaritra ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBT izay tsara ho fantatry ny olona bebe kokoa,” hoy izy.
Misy ireo fikambanana vitsivitsy miady mba hiarovana ny zon'ny pelaka sy maneho fomba fijery samihafa momba ny olona pelaka ao Azerbaijan. Saingy miatrika zava-tsarotra maro izy ireo. Araka ny filazan'i Ismayilzadeh, miatrika fanamby amin'ny famantarana ny tranga fankahalana na fanavakavahana ireo vondrona mpiaro ny zon'ny pelaka. “Mbola fady tanteraka ny momba ny LGBT, ary aleon'ny olona manafina ireo loza amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro, izany no mahatonga ny fiarovana azy ireo ho lasa sarotra kokoa,” hoy izy.
‘Jereo, iza no afenin'izy ireo ao amin'ny toeram-pitsaboana. “Mavi” (fanevatevana ny pelaka) afenina ao Semashko [hopitaly] na dokotera’, lalao “Ara-kiafina”.